Kismaayo News » Kooxda Kubadda koleyga Soomaaliya oo wacdaro dhigtay
Kooxda Kubadda koleyga Soomaaliya oo wacdaro dhigtay
Kn:Tartanka Isreeb reebka qaaradda Afrika ee dhinaca kubadda kolayga oo ka socda magaalada Daresalaam ee dalka Tanzania ayaa kooxda ragga Soomaalida waxay soo bandhigeen ciyaar wanaag iyo awood aan looga fadhiyin.
Kooxda Soomaalida oo ay foodda is dareen kooxda dalka Brundi ee isku aad aadka soonaha shanaad, ayay Soomaalidu ku badisay 98-80, taasi oo kooxda Brundi ay la timid 80 dhibcood, halkaasina ay guushii ku raacday Soomaaliya.
Ku xigeenka madaxa Kubadda kolayga qaranka Soomaaliyeed, Inj. Cabdulqadir Geedi oo ciyaarta kadib la hadlay saxaafadda ayaa ku tilmaamay guusha u soo hoyatay kooxda kubadda kulayga ee Soomaaliya, ciyaartoyda oo ah xul laga soo kala uruurshay, Maraykanka, Canada, Australia iyo Soomaaliya.
Mudane Cabdulqadir wuxuu ugu baaqay guud ahaan Soomaalida, gaar ahaanna qurbejoogta inay dhiiri galiyaan ciyaartoyda isla markaana ka qayb qaataan sare u qaadista tayada ciyaaraha.
Ka hor burburkii dawladdii dhexe ee milatariga ahayd, Soomaaliya waxay lahayd koox aad looga tixgalin jiray qaaradaha Afrika iyo Aasiya, laakiin burburkii kadib doorka kubadda kolayga ee dalku wuxuu noqday meelaha ugu ba’an ee dhibaatadu samaysay ayadoo ay yartahay inaad dalka ku aragto raadkii ciyaaraha kolayga oo mar ahaan jiray hiwaayadaha ay dhalintu ku hawoodaan barashadooda.